Abaphakeli nabahlinzeki bePet Bowl | I-China Pet Bowl Okuphakelayo Kwemboni
Ibhodlela Lokuphuza Inja Ephathekayo
Isici salesi sitsha senja esenziwe ngensimbi engagqwali siyasuswa, izitsha zensimbi ezingenazinsimbi ezingagqwali ezisekelweni zepulasitiki eziqinile.
Isitsha senja sensimbi esinezinsimbi ezimbili sifaka nesisekelo senjoloba esikhiphekayo esingenakususwa ukusiza ukuqinisekisa indawo yokudlela ethule, engachitheki.
I-Double Stainless Steel Dog Bowl ingagezwa ngomshini wokuwasha izitsha, vele ususe isisekelo senjoloba.
Kufanelekile kokubili ukudla namanzi.
Ibhodlela Lamanzi Lenja Eligoqekayo
Ibhodlela lamanzi le-Collapsible Dog lihle ngokuhamba nokuhamba ngezinyawo nenja yakho noma ikati lakho.Leli bhodlela lamanzi ngokubukeka kwemfashini, usinki obanzi uvumela isilwane sakho ukuthi siphuze amanzi kalula.
Ibhodlela Lamanzi Inja Eligoqekayo lenziwe nge-ABS, liphephile futhi liqinile, ukuqaqa kalula nokuhlanza. Igcina impilo nobungqabavu ezifuyweni zakho.
Hhayi izinja kuphela, kepha nezilwane ezincane ezinjengamakati nonogwaja.
I-Collapsible Dog Water Bottle yenzelwe ukugcina isilwane esingu-450 ML samanzi esilwaneni sakho ngemuva kokukhama amanzi endishini, kulula kakhulu ukusisebenzisa.
I-Stainless Bowl Bowl
Okokusebenza kwesitsha sensimbi esingenasinakha akunamandla okumelana nokugqwala, kunikeza enye indlela enempilo kupulasitiki, ayinayo iphunga.
Isitsha senja sensimbi esingenasici sinesisekelo senjoloba. Kuvikela phansi futhi kuvimbele izitsha ekushibilikeni ngenkathi isilwane sakho sidla.
Lesi sitsha senja sensimbi esingenasici sinosayizi abathathu, esifanele izinja, amakati nezinye izilwane.Kulungele ukwakhiwa okuluhlaza, ukudla okumanzi, ukuphatha, noma amanzi.
Isitsha sebhokisi le-Stainless Stainless Dog
Ukudla Kwezinja Okugoqekayo Nesitsha Samanzi
Lesi sidlo senja nesitsha samanzi esinomklamo ogoqekayo ongamane welule futhi ugoqe okulungele ukuhamba, ukuhamba izintaba, ukukhempa.
Ukudla kwenja okugoqekayo nesitsha samanzi kuyizitsha ezinkulu zokuhamba ngezilwane, kusinda futhi kulula ukuphatha ngebhakede elikhuphukayo.so-ke lingafakwa ku-loop yebhanti, ubhaka, i-leash, noma ezinye izindawo.
Isitsha sokudla kwenja nesitsha samanzi singashayeka ngosayizi abahlukene, ngakho-ke kufanelekile ukuthi zonke izinja ezincane neziphakathi, amakati, nezinye izilwane zigcine amanzi nokudla lapho ziphuma ngaphandle.